सलाद मासु संग "Obzhorka" - नयाँ वर्षको तालिकाको लागि ठूलो appetizer। यसलाई त्यहाँ आफ्नो तयारी लागि धेरै विकल्प छन् कि उल्लेख गर्नुपर्छ। हामी सबैभन्दा सबैलाई सरल र सुलभ परिचय गर्ने निर्णय गरे। निमन्त्रणा अतिथि को पेश्की लागि जो एक चयन गर्न - अप तपाईंलाई।
सलाद "Obzhorka" बीफ: चरण नुस्खा
यो अत्याधिकै स्वादिष्ट र सन्तोषजनक बाहिर जान्छ रूपमा यो डायनर पकवान, धेरै बस पकाएको छ। हामी क्लासिक संस्करण लागि आवश्यक:
streaks, चलचित्रहरू र बोसो बिना जवान बीफ - बारे 500 G;
मीठो प्याज -3मध्यम टुक्रा;।
रसदार गाजर ठूलो - 1 पीसी;।
अचार मध्यम आकार -4पीसी।
परिमार्जित तेल - खाद्य पदार्थ frying लागि;
स्वाद र विवेक प्रयोग गर्न - मेयोनेज, कटा मरिच र iodized नुन।
सलाद मासु संग "Obzhorka", जो हामी विचार गर्दै छन्, एक धेरै उच्च-क्यालोरी को नुस्खा। यसले मात्र सबै भन्दा पौष्टिक र स्वादिष्ट सामाग्री हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई कारण छ। र तपाईं यस पकवान पकाउन अघि, तिनीहरूले ठीक उपचार गर्नुपर्छ।
पहिलो, तपाईं, मासु टुक्रा कुल्ला गर्न पानी संग एक पट राखेँ, नुन थप्न जोश र 60-78 मिनेट पकाउन आवश्यक छ। यो समयमा, यस बीफ पूर्ण नरम हुनुपर्छ। यो शोरबा, सुन्दर हटाइएको र पराल गर्न अन्न मार्फत कटौती हुनुपर्छ।
मासु संग स्वादिष्ट सलाद "Obzhorka" बनाउन मात्र मासु संघटक, तर पनि सबै पहिले उल्लेख तरकारी उपचार गर्नुपर्छ। गाजर र प्याज को पराल र परिष्कृत तेल मा तला अलि ढाल्नु, साफ गर्न आवश्यक छ। लागि जाँदा अचार, यो सामाग्री बाँकी जस्तै तरिकामा चोट हुनुपर्छ।
खाजा खाना को गठन
सलाद "Obzhorka" बीफ सजिलै गठन गरिएको छ। यो अन्त गर्न, कुल पट जडित हुनुपर्छ उसिनेर मासु, अचार, तला प्याज र गाजर, र त्यसपछि सबै मेयोनेज भर्न र राम्ररी मिश्रण। आवश्यक छ भने, नाम सामाग्री स्वाद मसला थपियो हुनुपर्छ।
हामी छुट्टी तालिका सेवा
सलाद "Obzhorka" बीफ पकाएको भएपछि, यो एक गहिरो कप बाहिर राख्नु आवश्यक छ, र तुरुन्तै वर्तमान तालिकामा। सामान्यतया, यो पकवान एक पोसिलो र पौष्टिक रूपमा प्रयोग गरिन्छ छुट्टी तालिकाको लागि नाश्ता। तपाईं यो, र सामान्य पारिवारिक खाने के गर्न सक्नुहुन्छ हुनत।
एक स्वादिष्ट "Obzhorka" ससेज संग सलाद बनाउन
यो पकवान को तयारी को सिद्धान्त अघिल्लो एक धेरै समान छ। पहिलो, हामी सबै आवश्यक सामाग्री तयार गर्नुपर्छ:
धूम्रपान ससेज - 150 ग्राम;
मीठो प्याज -2पीसी औसत।
क्यान्ड रातो मृगौला सिमी -3ठूलो चम्मच;
स्वाद र विवेक प्रयोग गर्न - चोट मरिच र iodized नुन।
सलाद "Obzhorka" ससेज सजिलो र बीफ संग रूपमा सरल रूपमा छ। यी व्यञ्जन भिन्नता अझै पनि त्यहाँ छन् हुनत। पछि प्रस्तुत appetizer गर्मी को रूप मा तालिका सेवा गर्नुपर्छ।
त्यसैले, प्याज र गाजर, क्रमशः सफा गर्न त ठूलो grater मा आधा छल्ले र अंगीठी तिनीहरूलाई कटौती तपाईं घरमा हार्दिक सलाद पकाउन अघि आवश्यक छ। क्यान्ड रातो सिमी संग एक जार खोल्न थप आवश्यक छ, भोकमरी र अलग3ठूलो चम्मच तर्फ संघटक सेट गरिएको छ।
को लागि जाँदा धूम्रपान ससेज, त्यसपछि यो खोल देखि साफ र पातलो स्ट्रिप्स मा कटौती हुनुपर्छ।
तयार नाश्ता प्रक्रिया
सलाद धूम्रपान ससेज संग "Obzhorka" धेरै चाँडै पकाएको छ। पहिलो हामी मा गाजर र प्याज गर्न आवश्यक परिष्कृत तेल, र त्यसपछि तिनीहरूलाई नुन र मरिच खन्याउन। अर्को, तातो पदार्थ गहिरो कचौरा मा, राख्न रातो सिमी र ससेज थप्न आवश्यक छ। सबै सामाग्री को अन्त मा तपाईं स्वाद मसला संग मिश्रण र स्वाद गर्न आवश्यक छ।
उत्सव खाने को लागि Aright
समाप्त सेवा धूम्रपान ससेज संग सलाद यसको तयारी पछि तुरुन्तै सिफारिस गरिएको छ तालिका गर्न। , कि यो अझै पनि न्यानो हुनुपर्छ छ। इच्छित भने, यो थप comminuted लसुन लौंग थप्न सम्भव छ। यो घटक डायनर पकवान संग पनि अधिक स्वादिष्ट र सुगन्धित हुनेछ।
पटाखे संग एक हार्दिक appetizer बनाउन
सलाद ब्रेडक्रंब विशेष गरी युवा मान्छे मन संग "Obzhorka"। आखिर, यो सबै Gourmets, विशेष गरी किशोरावस्था यति रुचाउनु छन् जो केवल हार्दिक र मसालेदार सामाग्री समावेश गर्दछ।
त्यसैले, स्वाद डायनर पकवान तयार गर्न हामी आवश्यक:
धूम्रपान चिकन स्तन - बारे 500 G;
अचार मध्यम आकार -2पीसी।
तेज shoplifting पटाखे (तपाईं सहिजन र लाल शिमला खुर्सानी को स्वाद संग लाग्न सक्छ) - सानो प्याकेजहरू को एक जोडी;
सलाद पटाखे संग नुस्खा जो धूम्रपान छाती को प्रयोग समावेश "Obzhorka", यो एकदम मसालेदार गर्दछ। यस सन्दर्भमा, यो (विशेष गरी ठूलो परिमाणमा) प्रयोग गर्न जो पेट समस्या ती लागि सिफारिस गरिएको छैन।
तसर्थ, को तयारी को लागि मसालेदार सलाद को हड्डी र छाला को धूम्रपान स्तन राम्ररी स्पष्ट हुनुपर्छ, र त्यसपछि फाइबर मज्जा को शेष विभाजन। यो हात प्रत्यक्ष गर्न सकिन्छ। अर्को, हामी ककडी लाठी, गाजर काट्नु र grater मा ढाल्नु आवश्यक छ। प्याज बल्ब लागि जाँदा, तिनीहरूले आधा छल्ले मा कटौती हुनुपर्छ।
यसलाई अग्रिम आवश्यक छ बाहिर प्याकेज देखि पटाखे लिन र तिनीहरूलाई पन्छाएर गर्न। बाटो पेश वाणिज्य crunches लागि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ सलाद को तयारी को लागि, द्वारा। अन्यथा, यो हामी चाहनुहुन्छ रूपमा तीव्र बाहिर बारी छैन।
गर्मी उपचार प्रक्रिया र तीव्र भोजन को गठन
अलि कति शरमाना एउटा ठूलो पैन भुट्नु गाजर र प्याज लागि सामाग्री आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि। अर्को स्वाद मसला गर्न तरकारी browned र पूर्ण शांत गर्नुपर्छ। अन्तमा sauteed सामाग्री ठूलो कचौरा मा धूम्रपान चिकन छाती र अचार संग राख्न आवश्यक छ। मेयोनेज संग सलाद पोशाक, यो राम्ररी मिश्रित हुनुपर्छ।
नयाँ वर्षको तालिका गर्न उचित रुचाउने नाश्ता
रूपमा माथि वर्णन एक पकवान गठन, यो, एक सलाद कचौरा मा राखिएको हुनुपर्छ ब्रेडक्रंब र सुगन्धित स्टोर तुरुन्तै वर्तमान पाहुनाहरूसँग छिडकना। म अन्तिम संघटक को सलाद थप हुने कि जोड बस तालिका सेवा अघि चाहन्छु। हामी यो परिषद बेवास्ता भने, यो घटक सुनिनु चाँडै, कमी रोक्छ र एक अबोध्य गडबड प्रतिनिधित्व हुनेछ।
Rhubarb संग Patties: भराई नुस्खा
पन्नी मा आलु: छिटो र धेरै स्वादिष्ट
तरकारी संग ओवन मा मासु
एक ब्लेंडर मा smoothies
पिशाच जस्तै कसरी हेर्नु हुन्छ: निर्देशन
कसरी, फोटो को आकार वृद्धि मूल गुणस्तर राख्न
यो श्रृंखला "Londongrad": दर्शकहरुको र आलोचकहरु को समीक्षा
ओरिगेमी बारेमा रोचक तथ्य। योजना ", कागज डुङ्गा"
ट्युनिङ UAZ "पैट्रियट": आफ्नो सर्वश्रेष्ठ एसयूवी कसरी बनाउने?
एक नुस्खा र केही उपयोगी टिप्स: दूध र तातो पानी संग प्यानकेकहरू कसरी खाना पकाउनु
लागि बिक्री Apartments: कसरी छैन फन्दामा गर्न?
ग्राफिक्स त्वरक, NVIDIA GeForce GT 440: विशेषताहरु, साथीहरूको र प्रयोगकर्ता समीक्षा तुलना
आधुनिक oratorical बोली: genera र प्रजाति